Injustice2APK အားဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » မတရားမှုကို 2
မတရားမှုကို2APK ကို
အဘယ်သူသည်သင့်ရဲ့ Justice League အတွက်လား သင်အကြိုက်ဆုံး DC ကစူပါသူရဲကောင်းများ & villain မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲများဂိမ်းအတွက် join ။ သငျသညျဆန့်ကျင်တပ်ဖွဲ့များတိုက်ဖျက်ဖို့ Batman, Flash ကို & Wonder Woman နဲ့တူသူရဲကောင်းများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စည်းဝေး။ ပြောင်းလဲနေသော 3-on-3 တိုက်ပွဲအသစ် combo နဲ့အရူးအမူးပြိုင်ဘက်ကျွမ်းကျင်။ သင်ကစားပွဲအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းကိုတိုက်အဖြစ်အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူသင့်ရဲ့စူပါသူရဲကောင်းများ Upgrade ။ သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်အဘို့အဂီယာစုဆောင်းနှင့် PvP ပြိုင်ပွဲ၌သင်တို့၏ရန်သူများလွှမ်းမိုးကချန်ပီယံဖြစ်လာသည်။ တိုင်းစစ်တိုက်တိုက်သငျသညျ-join သတ်မှတ်နှင့်အဆုံးစွန် DC ကချန်ပီယံဖြစ်လာလိမ့်မည်!
•က Superman ရဲ့အပူရူပါရုံကိုက The Flash ကိုရဲ့လျှပ်စီးကန်, Harley Quinn ရဲ့မယားစကားဗုံးနှင့်ပိုပြီးသုံးပြီးသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်အပေါ်မော်ကွန်း combo တိုက်ဖျက်မည်
•သင့်အကြိုက်ဆုံး DC ကဇာတ်ကောင် '' စူပါရွေ့လျားသုံးပြီးလာမယ့်အဆင့်ကို-စီရင်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရန်သင့်တိုက်ပွဲများကိုယူ
•အစွမ်းထက်ဂီယာနှင့်သင်၏စူပါသူရဲကောင်းများစိတ်ကြိုက်တိုက်ခြင်းနှင့်သံချပ်ကာက Superman, Arkham Knight ဟာ Batman နှင့်ပိုပြီးများကဲ့သို့အထူးအက္ခရာများစုဆောင်းတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ဆုလာဘ်ရယူနိုင်သော
•ရေးအဖွဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတက်ကာကိုလညျးမတားဆီးလိဂ်စုဝေး! အတူတူသင်ကမ္ဘာ၏စုဆောင်းမှုကိုတားဆီးခြင်းနှင့်အဆုံးစွန်သူဌေး, Brainiac အနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်။
•, သူရဲကောင်း shards လှူဒါန်းမှု, လူမှုရေး-chat သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Be စီးနင်းမှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့်ပိုပြီး!
Console QUALITY အတ္ထုပ္ပတ္တိ
•မတရားမှုကို2အဆိုပါ hit ဂိမ်းမတရားမှုကိုဖြင့်ရွေ့လျားမှုအတွက်သတ်မှတ်ထားဇာတ်လမ်းဆက်လက်: ကြှနျုပျတို့ကိုများထဲတွင်ဘုရား
•ဖြောင့် console ကို-အတူတရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်ရုပ်ရှင်အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွငျးမှာအာရုံစှဲကပုံပြင်-up, ကောက်နှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စည်းလုံးရန်သင့်အားတက်ဖြစ်ပါတယ်ချိုးဖဲ့
•က Superman, The Flash နှင့်မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်အများအပြားပိုပြီးနှင့်အတူမိုဘိုင်း-ကစားအပေါ်အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်ကိုစမ်းသပ်ပါ
•အ PvP နယ်ပယ်တွင် Enter နှင့်ချန်ပီယံဖြစ်လာရန်ကမ္ဘာတဝှမ်းကစားသမားကိုစစ်တိုက်ခြင်း
•မော်ကွန်း PvP တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါ Flash ကို, Supergirl, Batman နှင့်ပိုပြီးများ၏အကြိုက်စည်းလုံးညီညွတ်
ယနေ့ယခု join နှင့်သင့်တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်စည်းလုံး!
https://www.facebook.com/Injustice2Mobile/: Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
YouTube ပေါ်မှာ Subscribe to: https://www.youtube.com/user/InjusticeGame
Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: https://twitter.com/Injustice2Go
Instagram ကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: https://www.instagram.com/netherrealmstudios/
နောက်ဆုံးရယ်မော Joker, ကြေကွဲဖွယ် Harley Quinn နှင့် Entangling အဆိပ်အိုင်ဗီမင်းမဲ့စရိုက်အဖွဲ့များ၏အဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်လာဖို့အတူတကွပူးပေါင်းပြီတကား အဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသူတို့ကိုတရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်နှင့် Multiverse တူသောသင်းမှကြီးမားတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုအောင်သစ်ကို passive နှင့်အဖွဲ့သည် Synergy နှင့်အတူ refactored ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မကောင်းသောအသုံးတက်ပါဝါ! အမျိုးမျိုးသောဘာဂ်ပါဝင်သည်။
1.07 GB ကို
၏ Marvel ပြိုင်ပွဲ ...
ဘောလုံးသူရဲကောင်းများ 2017 Pro
Shadowgun Legend ...
Easy VPN - အခမဲ့ VPN proxy၊ super VPN ဒိုင်းလွှား